Iingxaki kunye neengxabano kwi-Journalism
Akuzange kubekho ixesha elixakekayo kwiindaba zoshishino. Iimaphephandaba ziyancipha ngokukhawuleza kwaye zijongene ne-bankruptcy okanye ithemba lokuphuma kwishishini ngokupheleleyo. Iindaba zewebhu zikhuphuka kwaye zithatha iindidi ezininzi, kodwa kukho imibuzo yangempela malunga nokuba ingaba ithathe indawo yamaphephandaba .
Inkululeko yoxinzelelo, okwangoku, iyaqhubeka ingekho okanye isongelwa kumazwe amaninzi ehlabathini lonke.
Kukho neengxabano malunga nemiba efana neengqinisiso zengxelo kunye nokulungelelana okuqhubekayo. Kubonakala ngathi i-mess-tangled sometimes, kodwa kukho izinto ezininzi ezibandakanyekayo esiza kuzihlola ngokubanzi.
Ukuprinta i-Journalism kwi-Peril
Iimaphephandaba zinenkathazo. Ukujikeleza kuhla, i-revenue income iyahla, kwaye i-shishini liye lafumana ukutshatyalaliswa kokutshabalalisa nokunciphisa. Ngoko yintoni ikamva?
Ngelixa abanye abantu bethetha ukuba amaphephandaba afile okanye afa , amaninzi amashishini aqhelekileyo afana ne-digital digital. Uninzi luhambisa yonke imixholo yayo kwi-intanethi-nokuba ngababhalisi okanye kwi-free-kwaye oku kuya kwezinye izitishi ezifana neTV kunye nomsakazo.
Nangona kwakubonakala ngathi okokuqala ukuba i-teknoloji yezobugcisa ziza kuphumelela ngokwesiko, i-tide ibonakala ifumana ibhalansi. Umzekelo, amaphepha asekuhlaleni afumana iindlela ezintsha zokufumana ibali ukutsala abafundi abanomdla kwinxalenye encinci yesithombe esikhulu.
Ukunyuka kwe-Web Jouralism
Ngokuncipha kwamaphephancwadi, ukupapashwa kwewebhu kubonakala ngathi kwikamva leendaba. Kodwa sithetha ntoni ngokubhaliweyo kwewebhu? Kwaye ingabe ithathe indawo yamaphephandaba?
Ngokubanzi, i- journalism yewebhu ibandakanya iibloggers, intatheli zeendaba, abemi beendaba zengingqi, kunye namawebhusayithi apapashwe ngamaphepha.
I-intanethi ngokuqinisekileyo yavula umhlaba ukuba abantu abaninzi babhale nayiphi na into abayifunayo, kodwa oko akuthethi ukuba yonke le mithombo inokuthenjwa okufanayo.
U-Blogger, umzekelo, bathambekele ekugxinineni kwisihloko se-niche, njengabapheli beendaba . Ngenxa yokuba abanye balaba babhali abanalo uqeqesho okanye banenkathalo malunga nokuziphatha kweendaba, ukuxhamla kwabo bangakwazi ukufikelela kwizinto abazibhalayo. Oku akusiyo into esiyicinga ngayo "i-journalism" ngokutsho kwayo.
Abalobi beendaba baxhalabisa ngeenyaniso, beza entliziyweni yebali, kwaye banokubhaliweyo kwabo emsebenzini . Ukumba iimpendulo kunye nokubaxelela ngeendlela ezijoliswe kuzo kuye kube yinjongo yabaculi beendaba. Enyanisweni, abaninzi balaba baqeqeshi bafumene i-outlet kwilizwe le-intanethi, okwenza kube nzima kubaxhasi beendaba.
Ezinye iibloggers kunye nabathengi beendaba zentlalo abanamkhethe kwaye bakhupha iingxelo ezilungileyo . Ngokufanayo, ezinye iincwadana zeendaba zengcali azizinjongo kwaye zixhomekeke ngandlela-thile kwimiba yezopolitiko nezentlalo. Olu phuhliso lwe-intanethi luye lwadala zonke iintlobo ngapha nangapha. Le ngxaki enkulu kuba ngoku kuya kubafundi ukuba bathathe isigqibo sokuba yiyiphi into ethembekileyo kwaye yintoni into engekho.
Cinezela uFolonomi kunye namaLungelo angamaTywala
EUnited States, umshicileli ujabulela inkululeko enkulu yokunika ingxelo ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo kwimicimbi ebalulekileyo yosuku.
Le nkululeko yenkampani yokunyathelisa inikwe iSihlomelo sokuQala kuMgaqo -siseko wase-US.
Kwiindawo ezininzi zehlabathi, inkululeko yokukhuphela iphela okanye ayikho. Abathathi bamapolisa bahlala bevalelwe entolongweni, bebetha, okanye babulawa nje ngenxa yokwenza imisebenzi yabo. Kuma-US nakwamanye amazwe ashicilela kumahhala, iintatheli zijongene neendlela zokuziphatha eziyimfihlo, ukwazisa ulwazi kunye nokusebenzisana nokuthotyelwa komthetho.
Zonke ezi zinto zixhalabisa kakhulu kunye neengxoxo kwi-journalism. Nangona kunjalo, akunakwenzeka ukuba nantoni na eyaziphendulela kwixa elizayo.
I-Bias, Ukulinganisa, kunye neNjongo yoPhicotho
Ngaba iinjongo zokushicilela? Yiyiphi intetho yeendaba efanelekileyo kwaye ilinganisekile, kwaye oko kuthetha ukuthini ngempela? Abanyathelisi bangazibekela njani iingxaki zabo kwaye baxelele inyaniso?
Le ngenye yeyona nto iphambili yimibuzo yamhlanje .
Amaphephancwadi, iindaba ze-TV ze-TV kunye noonomathotholo basasazwa ngokutsha ukubika ingxelo ngamanqaku. Oku kungabonwa ngobukhulu kwiingxelo zezopolitiko, kwaye ngamanye amabali angafanelekanga ukuba abepolitiki awa lixhoba kulo.
Umzekelo opheleleyo ungatholakala kwi-TV ye-cable nws. Unokubukela ibali elifanayo kwiinkonzo ezimbini kwaye ufike kwiimbono ezahlukeneyo. Ulwahlulo lwezopolitiko luye lwasuka kwiinkalo ezithile zenkcubeko, ukuprinta, emoyeni nakwi-intanethi. Ngombulelo, uninzi lwababhali beendaba kunye neentengiso ziye zagcina ingqwalasela kwaye ziqhubeka zixelela ibali ngendlela efanelekileyo kunye nobulungisa .
Yiya KubuGqabhaka obungapheliyo Izitampu ezifanelekileyo kwiNdalo
Indlela yokuhamba ngeSithuthuthu ngeRhasi, i-Icy, kunye neemeko zezulu eziManzi
Isiseko seMammalian Temperature Regulation
Indlela yokufaka i-New Car Stereo